I-Glass Glass Chemistry: Isebenza Kanjani?
Ibaladi yeKlasi Chemistry
Igalagi yangaphambili yathatha umbala wayo kwizinto ezingcolileyo ezazikhona xa iglasi lenziwe. Ngokomzekelo, 'ingilazi yamabhodlela emnyama' yayingumbala omnyama okanye obomvu, okokuqala kuveliswa kwi-17th Century England. Le glasi yayimnyama ngenxa yeempembelelo zensimbi entlabathi ezisetyenziselwa ukwenza iglasi kunye nesibabule kumsi womlilo ovuthayo esetyenzisiweyo.
Ukongezelela kokungcola kwendalo, igalazi yombala ngokuzisa ngamaminerali okanye i-salts (metal pig).
Imizekelo yeziglasi eziqhelekileyo ezinemibala ziquka iglasi yerubhi (eyakhiwe ngo-1679, isebenzisa i-chloride yegolide) kunye neklasi ye-uranium (eyenziwe nge-1830s, iglasi ekhangela emnyama, eyenziwa nge-uranium oxide).
Ngamanye amaxesha kuyimfuneko ukususa umbala ongafunekiyo obangelwa ukungcola ukwenza iglasi ecacileyo okanye ukukulungiselela umbala. Iidolorizers zisetyenziselwa ukunciphisa izinyithi zesinyithi nezesulfure . I-Manganese dioxide kunye ne-cerium oxide i-decolorizers evamile.
Imiphumo ekhethekileyo eninzi ingasetyenziswa kwiglasi ukuchaphazela umbala wayo nokubonakala kwayo yonke. Ingilazi ye-Iridescent, ngamanye amaxesha ibizwa ngokuthi iirasi ye-iris, yenziwa ngokufaka izithako zetsimbi kwiglasi okanye ngokutshiza umphezulu nge-stannous chloride okanye ukukholisa i-chloride nokuyiphinda kwakhona kwindawo yokunciphisa umoya. Iiglasi ezidlulileyo zibonakala zikhona ukusuka ekuboniseni ukukhanya kwezinto ezininzi zezulu.
Iglasi yeDichroic iyimpembelelo enkulu apho igalazi ibonakala imbala eyahlukileyo, kuxhomekeke kwinqanaba elibhekiselwe kuyo.
Esi siphumo sibangelwa ngokusetyenziswa kwezinto ezincinci zetsimbi ze-colloidal (umzekelo, igolide okanye isilivere) kwiglasi. Amacwecwe amancinci avame ukugutywa ngeglasi ecacileyo ukukhusela kwisitya okanye i-oxidation.
i-iron oxides imifuno, i-brown
i-manganese oxides i-amberst amber, i-amethyst, i-decolorizer
i-cobalt oxide oluhlaza
i-chloride yegolide ruby obomvu
i-carbon oxides emnyama / emdaka
ukuxuba i-manganese, i-cobalt, isinyithi mnyama
i-antimony oxides mhlophe
uranium oxides eluhlaza okomhlaza (ukuvutha!)
i sulfure emnyama / emdaka
zethusi obomvu okomvu, obomvu
i-tin compounds mhlophe
khokela nge-antimony lubhelu
Ingaba iMbewu Imbewu Yobuthi?
I-Mistletoe Toxicity ichazwe
Ukunyameka Kovavanyo lomsebenzi?
Kutheni Kuthiwa I-Mint Yenza Umlomo Wakho Uve
Imizekelo yeKhemistry yoBomi bemihla ngemihla
Kutheni Abantu Abadala Bakhupha? INzululwazi yeBhunga elimnandi kunye nokuguga
Kutheni Ufaka iTyuwa kuManzi abilayo?
Ixesha lokuphela kweeKhemikhali zasekhaya
Iikhemikhali eziqhelekileyo ezinokunikela ngesicatshulwa sobuxoki be-TSA Swab Test
Izongezelelo zeMichiza kwiZokudla Udla
Imibuzo yeElement & Periodic Table
Imkhukula kunye noNogumbe
Ukuzivocazisa ekuKhankeni iZifundo kunye neeVenzi
I-FAQ ye-Skateboarding: Ungayigcina Njani Ukuguquka Xa U-Olly?
2018 Iintshukumo zamagama
Isixhobo sakho sokuHlola esiBalulekileyo
Yiyiphi iCol Cab iLolk?
I-American Revolution: iMfazwe yaseGuilford House House
Kutheni i-Angelea Preston yayingavumelekile?
Ixesha leManhattan Project
Biography kaSir Edmund Hillary
Iingqungquthela zehlabathi zePoker Main Event Winners List
Izibalo zeeNyuvesi zeeNyuvesi zeTulane
UMacon Bolling Allen: Ummeli wokuqala we-Afrika-waseMelika
Ngaba Amanzi okanye aphakathi kobungcono bokugubha nge-Acrylic?
AmaSurnames aseScottish - Iintsingiselo kunye neMvelaphi
Yintoni uFannie Mae kunye noFreddie Mac?
Indlela Yokusebenza eKristan Kriya
'Inkcazo' kaWilliam Wordsworth 'yeDaffodils'
Ukuzixhalabisa: Inyopho yesifo soMoya
Uxinzelelo lwaMoya kunye nendlela echaphazela ngayo imozulu
I-Etiquette yokuvakashela ikhaya laseTshayina
Ukuphuhlisa Ubomi Bokuphila NoThixo
UJohn Joseph Merlin: U-Father of Skating Skating